साउन ३१ गते शनिवार? यस्तो दुर्लभ योगका कारण आज देखि यी राशि मालामाल – ramechhapkhabar.com
साउन ३१ गते शनिवार? यस्तो दुर्लभ योगका कारण आज देखि यी राशि मालामाल
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ): यो साता टाढाका नातागोता वा परिवारजनसँग प्रविधि मार्फत भेटघाट हुनेछ । शुभ समाचार सुन्न पाईएला । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । साहित्यिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रबाट जनताको गतिलो समर्थन पाईनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,५ र शुभरङ्ग गुलाबी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व दुर्गाजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
वृष (इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो): नजिकको व्यक्तिको सहयोगबाट कार्य पुरा हुनेछ । समाजमा कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ । टाढाका नातागोता वा परिवारजनसँग प्रविधि मार्फत भेटघाट हुनेछ । कलकारखाना र बन्दव्यापारमापनि राम्रै हुनेछ । शुभ समाचारपनि सुन्न पाइएला । यो साताका लागि शुभअङ्क १,७ र शुभरङ्ग पहेंलो वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व नवग्रहको स्मरण र दर्शन गर्नाले अधिक सफलता हात पर्नेछ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा): यो सातामा नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । महिला वर्गबाट सहयोग मिल्नेछ । कृषि र घरायसी कामहरू अघी बढ्नेछ । प्रविधि मार्फत पारिवारिक भेटघाट हुनुका साथै इष्टमित्रहरूसंग पनि मेलमिलाप हुनेछ । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग मिल्ला । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,८ र शुभरङ्ग हरियो वा पहेँलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व भैरवजीको स्मरण गर्नाले अधिक सफलता हात पर्नेछ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) : यो साता अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्श गर्नु पर्ला । मनमा देखिने अस्थिरता अधैर्यताका कारण निर्णायक क्षमतामा कमी आउनेछ । सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ । मध्य साताबाट भने लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको काम पूरा हुनेछ । शुभकार्यको चर्चापनि चल्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,७ र शुभरङ्ग हरियो वा सुन्तलारङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व भैरवजीको दर्शन गर्नाले अधिक सफलता हात पर्नेछ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) : यो साता नयाँ जिम्मेवारी पाइएला । अरुलाई प्रभावित पारेर काम बन्नेछ । नयाँ कार्यको योजना बन्ला र शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ, तर स्वास्थ्य प्रति सजकता अपनाउन जरूरी छ । साताको अन्त्यमा दुष्ट व्यक्तिको संगतले आत्मघाती काम गर्न पुगिएला । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,५ र शुभरङ्ग खौरो वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको दर्शनगरी कार्य गर्दा राम्रो हुनेछ ।
कन्या (टो, पा, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) : शुभचिन्तकहरूले पूर्ण समर्थन प्रदान गर्नेछन् । धर्म,कर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । विशिष्ट व्यत्तिको भेटघाटले मन प्रसन्न हुनेछ । मध्य सातामा मन खिन्न हुने स्थिति आउनेछ र बढी धन खर्च होला । यो साताका लागि शुभअङ्क २,६ र शुभरङ्ग सेतो वा हरियो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व बगलामुखीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
तुला (रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) : यो साता मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउनेछ । बोलीको भरमा कार्य सम्पादन हुनेछ । पारिवारिक साथ र सहयोग मिल्नेछ । नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । साताको मध्यमा मन खिन्न हुने स्थिति आउनेछ । आर्थिक कारोवारमा मन्दीपनि आउनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,९ र शुभरङ्ग निलो वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व आफ्नो ईष्ट देवताको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
वृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) : पूर्व योजित यात्राका योजना विफल हुनेछन् । कार्य सम्पादनमा सहजता नमिल्ला । स्वास्थ्य प्रति सजक रहन आवस्यक छ । साताको उत्तरार्धबाट महिला वर्गबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । नयाँ वस्त्र, अलंकारको प्राप्ति हुनेछ । साझेदारीको कर्यबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त मिल्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,७ र शुभरङ्ग रातो वा खैरो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको स्मरण गर्नाले सफलता हात पर्नेछ ।
धनु (ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे) : यो साता शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्न सके आगामी दिनलाई अझ सकारात्मक बनाउ सकिनेछ । सामाजिक क्षेत्रबाट सहयोग मिल्नेछ । साताको मध्यमा मन खिन्न हुने स्थिति आउनेछ । आर्थिक कारोवारमा मन्दी आउनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,९ र शुभरङ्ग रातो वा पहेंलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व हनुमानजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
मकर (भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि) : यो साता धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यमा सरिक भाईनेछ । आफन्तको सहयोग प्राप्त हुनेछ । वैदेशिक वा कूटनीतिक नियोगको काम अघी बढ्नेछ । प्रेम जीवनबाट सफलता मिल्नेछ । विपरीत वर्गप्रति आकर्षण बढ्नेछ साथै अकस्मात धन सम्पत्ति हात पर्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ६,७ र शुभरङ्ग गुलाबी वा खैरो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व दुर्गाजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा) : यो साता शुभ समाचार सुन्न पाइएला । जुक्ति बुद्धिको प्रयोगले समस्या सुल्झाउन सकिनेछ । बोलीको प्रभाबपनि बढ्नेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्लान् । नसोचेको ठाउँबाट धनागम हुनेछ । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग पाईनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,९ र शुभरङ्ग सेतो वा खैरो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व हनुमानजीको स्मरण गर्नाले सफलता मिल्नेछ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि) : रोकिएको अधुरो कार्यले पूर्णता पाउनेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । प्रेमीको सहयोग प्राप्त हुनेछ । छोटो यात्रापनि होला । प्रेम जीवनमा सफलता पाईनेछ । साताको उत्तरार्धबाट महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । यो साताका लागि शुभअङ्क ६,७ र शुभरङ्ग सेतो वा घ्यूरङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विष्णुजीको स्मरण गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ हुनेछ ।